Col: C/laahi Cali Macoow:(Baarlamanka cusub hadoortaan madaxweyne lagu aamini karo dalka)
Col. C/laahi Cali Macoow oo kamid ah saraakiisha ciidamada xooga dalka soomaaliya,ayaa baarlamanka cusub ee dhowaan ladhaariyay ugu hanbalyeey jagada loo magacaabay.
Col.ayaa kadalbaday baarlamanka ineey soo doortaan madaxweyne daacad ah,dalkana kasaara dhibaatada iyo dagaalada daba dheeraaday,wuxuu kaloo sheegay in loo baahanyahay hogaamiye aan ku xirneen dalalka shisheeye ee aan marnaba raali ka ahayn doowladnimada Soomaaliya.
“Waxaad u dhaarateen waa inaad dalka ugu shaqeysaan si daacad,ee maahan inaad uxaglisaan shaqsi,mana ahan in qofkii jeebka idiin buuxiya aad codkiina siisaan,ilaah kabaqa doorta qof udiirnaxa shacabka dhibaateeysan,doorta qof agoonta kasoo aruuriyada dariiqyada,doorta masuul dhisa ciidamada xooga dalka Soomaaliya,doorta qof soo celiya sharafkii uu lahaa dalka Soomaaliya”ayuu yiri Cl. C/laahi Cali Macoow oo lahadlaayay warbaahinta Muqdisho.
Col. C/laahi Cali Macoow ayaa ugu danbeyn baarlamanka cusub kadalbaday ineey wax walbo kahormaraan danta dalka iyo dadka,oo ay noqdaan baarlamaan sharaf leh,sidokale waxa uu madaxda dalka ee lasoo magacaabi doono ugu baaqay ineeysan noqon sidii kuwii iyaga kahoreeyay ee marwalbo looga yeeri jiray magaalooyinka Addis Ababa iyo Nairobi,ayna kala gartaan cadawga iyo saaxiibka ummada Soomaaliyeed.